ဒုက္ခသည် | ZAYYA
← ကြွေကျမယ့် အသီး
မဟာပုရိသ ဘယ်ကစ →
ဆိုလိုတာက ဘဝ ရဲ့ ဒုက္ခကို ကောင်းကောင်း မသိရင် စင်စစ် ချမ်းမြေ့တဲ့ သုခ ( သန္တိ ) ကို ခင်ဗျား မရဘူး။ ရှင်သန်နေတဲ့ မိမိရဲ့ ဘဝ ဒုက္ခ အပေါ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ( စိတ်နှလုံးထဲ အထိ ) မြင်သိလာ တဲ့ အခါ – ရှင်သန်နေခဲ့တဲ့ လမ်းဟောင်း အတိုင်း ခင်ဗျား တစက္ကန့်လေးတောင် နေလို့ မရတော့ဘူးရယ်။ ဥပမာ – ခင်ဗျားက အိမ်မှာ ရှိတယ်။ ခင်ဗျား အိမ်မီးလောင်နေတယ်။ မီးလောင်နေကြောင်းကို မသိဘူး။ ကောင်းကောင်း မွေ့နေမယ်။ တစ်ယောက်က – ခင်ဗျား အိမ်မီးလောင်နေတယ်လို့ လာပြောမယ်။ မိမိအိမ် အကြောင်း မိမိ မသိဘဲ – ငါ့လာနှောက်ယှက်ရကောင်းလား စွတ်ပြောရင် ဘယ်သူ လွန်မလဲ။ တကယ်တမ်းမှာ ခင်ဗျား အိမ် မီးလောင်နေပြီ ဆိုတာ ခင်ဗျား မြင်သွားရင် – စောနက မွေ့နေမိတာမျိုး မဆိုထားနဲ့ တစက္ကန့်လေးတောင် ခင်ဗျား နေနိုင် ပါ့မလား။ တစ်အိမ်လုံး ဟုန်းဟုန်းတောက်နေပြီ ဆိုတာ မြင်သိလိုက်မိတဲ့ ခဏ ၊ ခင်ဗျား ထွက်ပြေးဖို့ ပုဆိုးပုဝါတောင် နိုင်ပါတော့မလား။ “အေးဆေးပါကွာ” လို့ လေတစ်ချွန်ချွန်နဲ့ တစ်ရေးနှစ်ရေး နှပ်နေနိုင်သေးရဲ့လား။ ဖြစ်နိုင်တာက – အသက်ဘေးရယ်လို့ နီးနီး မြင်လိုက်ရတဲ့အခါ ခင်ဗျား ဇနီး၊ သားမယားတောင် မေ့ကောင်း မေ့သွား နိုင်သေးတယ် မဟုတ်လား။ စင်စစ် မိမိ အိမ် မီးလောင်နေကြောင်း သိမြင်လိုက်တာဟာ အဲ့ဒီ အိမ်က အလွတ်ရုန်းပြေးနိုင်ဖို့ အစ ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ပြောကြည့်မယ်။ အဘိုးအို တစ်ယောက် ရှိတယ်။ အသက် ရှစ်ဆယ်လောက် ရှိပြီ။ သူ့ မျက်လုံးက ကွယ်နေတယ်။ ဒါကို သူ့အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေက မျက်လုံးကို ကုသသင့်ကြောင်း ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဘိုးအိုက ဒဿနဆရာ၊ ယုတ္တိဗေဒ သမား၊ နောက်ပြီး စာသမား လည်း ဖြစ်သေးတယ်။
“ကျုပ်အတွက် မျက်လုံးမြင်ရဖို့ ဘာကြောင့် အသည်းအသန် လိုအပ်နေတာတဲ့လဲ။ ကျုပ်မှာ သား ဆယ့်နှစ်ယောက် ရှိတယ်။ အဲ့တော့ မျက်လုံး နှစ်ဆယ့်လေးလုံး ရှိတာနဲ့ အတူတူပဲ မဟုတ်လား။ သူတို့မှာ ဇနီး ကိုယ်စီ ရှိတယ်။ အဲ့တော့ ဇနီးဆယ့်နှစ်ယောက် ။ နောက်ထပ် မျက်လုံး နှစ်ဆယ့်လေးလုံး။ ကျုပ်မှာလည်း ဇနီးရှိတယ်။ အဲ့တော့ နောက်ထပ် နှစ်လုံး ထပ်ပေါင်းလိုက်ဦး။ ဒါ့အပြင် ကျုပ် သားတွေမှာ သူတို့ သားသမီးတွေ ရှိသေးတယ်။ အိုးးး………ကျုပ်မှာ မျက်လုံးတွေက အများကြီးရယ်။ ကျုပ်ကိုယ် ကျုပ် အတွက် ဘယ့်နှယ် နောက်ထပ် မျက်လုံး ရှိနေရဦးမှာတဲ့လဲ။ ဒီမျက်လုံး နှစ်လုံး မမြင်ရတော့ကော ဘာအရေးလဲ။ ဒီအိမ်ထဲမှာတင် မျက်လုံးပေါင်း တစ်ရာ နီးပါး ရှိနေတယ် မဟုတ်လား။ ကျုပ် မျက်လုံးလေး နှစ်လုံး အတွက် အရေး စိုက်စရာ ဘာလိုနေဦးမလဲ။”
အဘိုးအိုက သူ့ဆင်ခြေ သူ့ယုတ္တိကို လက်ခံစွဲမြဲထားတယ်။ သူ့အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေလည်း လက်လျော့ရတော့တယ်။ အဲ့လိုနဲ့ တစ်ည အိမ်ကို မီးလောင် ပါလေရော။ သူပြောခဲ့တဲ့ မျက်လုံးပေါင်း တစ်ရာနီးပါးက ထွက်ပြေးသွားကြတယ်။ အဘိုးကြီး ဖြစ်တဲ့သူ့ကို အားလုံး မေ့လျော့ ထားခဲ့ကြတယ်။ အိမ်မီးလောင် ပြီဟေ့ ဆိုကတည်းက ကြောက်အား လန့်အား ထွက်ပြေးမိလိုက်တာ အိမ်ပြင်ကို ရောက်မှ သတိရကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မမှီတော့ဘူးရယ်။ ဘာ လုပ်ကြမတဲ့လဲ။ ပိုကြီးလာတဲ့ မီးညွှန့်တွေကြောင့် အိမ်ထဲ ဘယ်သူမှ ပြန်မဝင်တော့ဘူး။ အထဲမှာ မျက်မမြင် အဘိုးအိုတစ်ယောက်တည်း ဟိုဘက်တိုးလည်း မီး၊ ဒီဘက်တိုးလည်း မီး၊ အရှင်လတ်လတ် သင်္ဂြိုလ်ခံရဖို့သာ ရှိတော့တယ်။ တကယ်က သူ့မှာ အချိန်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီမျက်လုံးကိုသာ အချိန်မှီကုသခဲ့ရင် ဒီအဖြစ် ကြုံချင်မှကြုံရမယ်။ သူ့ ယုတ္တိအတွေးတွေ တက်တက်စင်အောင် လွဲသွားခဲ့ပြီ။ အခုတော့ နောက်ကျသွား ခဲ့ပြီ။
ဗုဒ္ဓက ခင်ဗျား ဘဝဟာ ဒုက္ခ ဖြစ်တယ်လို့ အထပ်ထပ် ပြောနေတာဟာ ခင်ဗျား အိမ်မီးလောင်နေတယ်-ခင်ဗျားလည်း ကန်းနေတယ်လို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောနေတာ မျိုးပဲ လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အချိန်ရတုန်းမှာ ပြင်ဆင် ကုသထားသင့်တယ်။ ခင်ဗျား မျက်လုံးက ကုနိုင်နေတယ်။ ဒါဆို ခင်ဗျား ဒီမီးဘေးက လွတ်မှာပဲ။ ခင်ဗျား ကိုယ် ခင်ဗျား ကယ်တင်နိုင်တယ်။ ဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံးနဲ့ လွတ်မြောက်လာခဲ့မယ်။
ဗုဒ္ဓဟာ စင်စစ် အဆိုးမြင်ဝါဒီ တစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး။ အနောက်တိုင်း က ပုဂ္ဂိုလ်များက ဗုဒ္ဓကို အဆိုးမြင် ဝါဒီလို့ စွပ်စွဲ သမုတ်တယ်။ သူတို့တင် မကဘူး – အရှေ့တိုင်းမှာလည်း အဲ့သလို သမုတ်ပါသေးတယ်။ သူတို့တွေ အမြင်မှာ ဗုဒ္ဓဟာ ဘဝတစ်ခုလုံးကို အဆိုးလို့ မြင်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ အဆိုးမြင်ဝါဒီပဲ ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ စင်စစ် ဗုဒ္ဓဟာ ရှိုပင်ဟောင်ဝါ လို အဆိုးမြင်ဝါဒီ မဟုတ်ဘူး။ ရှိုပင်ဟောင်ဝါဟာလည်း- ဘဝကို ဒုက္ခ စင်စစ် ဖြစ်တယ် ဆိုတာမျိုး ပြောခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေတဲ့ မတူညီဘူး။ ရှိုပင်ဟောင်ဝါ ပြောတဲ့ စကားကို တစ်ခွန်းကို ကြည့်ကြည့်မယ်။
“Life is misery and there is no way to get out of it. You have to suffer it, nothing can be done about it. Man isahelpless victim.”
“ဘဝသည် ဒုက္ခဆင်းရဲ ဖြစ်သည့်အပြင် ထွက်မြောက်ရာ လမ်းမရှိ။ ရင်ဆိုင် ခံစားရဖို့သာ ရှိ၏။ မည်သို့မျှ မတတ်နိုင်။ လူသည် ကယ်ရာမဲ့သော ယဇ်ကောင်သာတည်း”
အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်က – ခင်ဗျား အိမ် မီးလောင်နေတယ်၊ ပြေးလို့လည်း မလွတ်ပါဘူး။ အသေသာခံလိုက်တော့ – လို့ ပြောတယ်။
ဗုဒ္ဓလို ပုဂ္ဂိုလ်က – ခင်ဗျား အိမ် မီးလောင်နေတယ်၊ ပြေးဖို့လမ်း ရှိတယ်။ ဒါတွေ ပြင်ဆင်ပြီး ပြေးပေတော့ – လို့ ပြောတယ်။
Buddha is right: in your life, whatsoever you do, you are bound to meet misery. And as time passes, more and more misery, because life starts slipping out of your fingers, death starts overshadowing you. And you become very tense — life is slipping by and you have not arrived anywhere yet. You start running, you put all that you have at stake… but only death is the culmination of what you call life. How can death be the culmination of life? If death is the culmination of life then life is utterly useless — not only useless butavery ugly joke played on man.
Buddha is right: your life simply proves not only that YOU are wrong, but it even proves that the God you worship must be wrong. It not only proves YOU wrong, it proves your popes and your shankaracharyas wrong. It proves your so-called religions wrong, because they don’t help in changing your quality of life. They don’t change your vision, they don’t change your insight. They don’t bring more sensitivity and awareness to you so that you can live onanew plane, inanew plenitude, inanew fullness.
Ref: Osho: Dhammapada- The Way of Buddha.